DINGANA FAMPIROBOROBOANA ALIKA, ALIKA KELY ARY FIOMPIANA ALIKA - ALIKA
Dingana fampiroboroboana alika, alika kely ary fiompiana alika
Fahaterahana hatramin'ny 3 herinandro
Ny 20 andro voalohany amin'ny fiainana an-jazakely dia tsy afaka mianatra be izany. Ny fahaizan'ny saina dia tsy misy. Ny zaza dia hanao zavatra rehefa mila sakafo, torimaso, hafanana ary ny reniny. Mandritra ny 3 herinandro voalohany dia zava-dehibe tokoa ny hikarakarana ny tohodrano. Izy indray no hikarakara ireo alikakely. Indray mandeha na indroa isan'andro dia tokony hokarakarain'ireto alika kely ireto ary tokony holanjaina isan'andro. Nandritra ny 3 herinandro voalohany, ny ankamaroan'ny tohodrano dia te ho any amin'ny toerana mangina, tsy any amin'ny faritra onenan'ny fianakaviana. Pups mijanona madiodio ao anaty boaty fandefasana azy mandritra ny 20 andro voalohany amin'ny fiainany.
3 hatramin'ny 4 herinandro
Amin'ny andro faha-21 dia sahala amin'ny fisian'ny alika kely an'ny alika kely. Tsy maninona na inona na inona karazany, io no fotoana hifohazan'ny fahatsapana mandry. Manomboka amin'ny andro 21 ka hatramin'ny 28 ny alika kely dia mila ny reniny mihoatra noho ny fotoana hafa satria manomboka mivoatra ny ati-dohany sy ny rafi-pitabatabana ary fantany ny manodidina azy. Rehefa mitsambikina avy tao anaty boaty i Neny, dia nijery azy tampoka izy nanontany tena hoe ho aiza izy. Ny pups dia mety manomboka mihanika avy ao anaty boaty whelping amin'izao vanim-potoana izao, ka tonga ny fotoana hanitarana ny tranony. Amin'ity dingana ity dia manampy kely isika faritra misy vilany eo akaikin'ny vata famarana . Raha misy alika kely hamaha ny reniny amin'ity sehatra ity dia hisy fiatraikany lehibe eo amin'ny fahasalamana ara-pihetseham-po izany. Ny fitomboan'ny fientanam-po dia mamony fotsiny satria tsapan'ny alika kely fa velona izy. Amin'ity vanim-potoana ity koa dia mety hivoatra toy ny saro-kenatra sy tahotra ny toetra mampiavaka azy. Ny toetra ratsy rehetra izay mivoatra amin'ity dingana ity amin'ny fiainana matetika dia toetra maharitra maharitra.
4 ka hatramin'ny 7 herinandro
Manomboka amin'ny andro 29 ka hatramin'ny 49, dia hisy alika kely miala ny faritra fatoriana boaty. Tsy ho lasa lavitra izy ireo fa hanomboka hizaha. Amin'ity fotoana ity dia manitatra ny faritra misy azy ireo izahay mba hanampiana faritra filalaovana sy fisakafoanana amin'ny antoandro. Ity no fotoana hamindrana azy ireo ho any an-dakozia sy ny efitranon'ny mpianakavy, izay misy fiainana ao an-trano. Tsy ny taona tokony hipetrahana ao amin'ny efitrano fandriana aoriana, garazy na trano fitahirizana. Mandritra io fotoana io dia hisy alika kely hianatra hamaly ny feo, feo ary hahafantatra olona samy hafa. Ny alika kely ao amin'ny vondrona misy azy dia hametraka 'baiko pecking', ny sasany te hitarika ary ny sasany hanaraka. Izay lehibe no hihinana voalohany ary hiandry ny omega. Ireo manjakazaka dia mety ho lasa mpampijaly sy mamaky ny kilalao rehetra. Ity dia dingana lehibe hijerena hianarana ny toetran'ny zanak'alika tsirairay ary tokony hampiasaina amin'ny fametrahana alika kely amin'ny trano mety. Ny fandalinana siantifika sasany dia manaporofo fa raha misy mpampijaly olona ao anaty fako manalalaka ny hafa ary saro-kenatra izany dia mety hametraka toetra izay sarotra be mihodina, fa zava-dehibe koa ny hamelana alika kely ao amin'ny vondrona sosialy haharitra adventurous ary ny alika kely mba hananany fahaiza-manao fifaninanana ara-tsosialy Amin'io naoty io ihany, ny alika kely dia tsy tokony havela hanery loatra. Na dia mila mianatra mifehy tena amin'ny vondrona sosialy aza ny alika kely saro-kenatra, dia mila mianatra ny alika kely iray fa tsy ekena ho mpampijaly. Mila misaraka ny karazany isan-karazany amin'ny taona samy hafa. Matetika raha alaina aloha ilay mpampijaly dia hanafaka ny saro-kenatra ny alika kely.
Amin'ny herinandro 7, ny pup dia heverina ho mandroso ara-pihetseham-po ary vonona hianatra, saingy mbola tsy manana ati-doha efa lehibe ny alika. Amin'ny 7 herinandro dia afaka manomboka fiofanana crate mandritra ny adiny iray na roa isan'andro ny mpiompy zaza miaraka amina zaza 2 ao anaty vata. Manampy amin'ny fanahiana misaraka izany. Amin'ny valo herinandro dia tokony afaka mandeha ao anaty vata irery ny alika kely mandritra ny 8 herinandro, ary efa ho vonona amin'ny trano vaovao.
Ny alika kely dia tsy tokony hesorina amin'ny reniny alohan'ny 7-8 herinandro. Ny alika reniny dia mampianatra ny alikakely amin'ny fombam-pako, fanajana, fahaiza-manao ara-tsosialy ary fahalalam-pomba mety, miaraka amin'ny lesona sarobidy maro hafa. Rehefa tsy mahita an'ity dingana ity ny alika kely dia mety hiteraka olana amin'ny fitondran-tena amin'ny ho avy izany satria ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatakatra ny fihetsika alika voajanahary mba hampianarana an'izany ny alika.
7 ka hatramin'ny 12 herinandro
Manomboka amin'ny andro faha-50 dia mandeha amin'ny alàlan'ny alika ny zaza ary efa vonona amin'ny fiainana lavitra ireo mpiray tanindrazana aminy izy. Izay ianaran'ny alika kely dia tazonina ary ho lasa isan'ny lasa alika sy ny toetrany. Ny ankamaroan'ny tohodrano dia mitsahatra tsy mikarakara ny zanany alohan'ny 7 herinandro, satria manan-nify izy ireo ary manosika azy ireo hiala. Raha tavela miaraka amin'ny tohodrano ny zaza mandritra io vanim-potoana io dia azo ovaina ny fivelarana ara-pihetseham-po satria miankina aminy foana izany. Toy izany koa no mety hitranga raha toa ka apetraka miaraka ireo fako. Mifampiankina izy ireo fa tsy ilay tompona vaovao ary matetika izy ireo dia tsy mahita fiarovana sahaza azy amin'ny reniny na mpiray tampo aminy. Mila ny tompony vaovao izy ireo handray ny andraikiny ary zava-dehibe ny fahafantaran'ny olombelona ny fihetsika alika voajanahary mba hanatanterahana ny voa sy ny filan'ny alika kely. Ny tifitra voalohany dia tokony hatao amin'ny taona 7,5 ka hatramin'ny 8 herinandro.
Rehefa mijanona eo amin'ny fako ny alika kely aorian'ny 8 ka hatramin'ny 9 herinandro tsy misy fifandraisan'olombelona dia tsy mifanaraka amin'ny fiainam-piarahamonin'olombelona izany. Ny fotoana optimum haka alika kely dia 8 ka hatramin'ny 9 herinandro. Tsara kokoa hatrany ny fananana alika kely amin'ny tompony vaovao sy amin'ny tranony vaovao. Matetika dia alain'ny 8, 9, 10 na 11 herinandro ny alika kely. Ny alikakely dia afaka manao tsara raha toa ka nandany fotoana be dia be ny fiompiana azy ireo nanalavitra ireo mpiray tam-po aminy. Raha ny tokony ho izy, ny 9 herinandro dia toa vanim-potoana tonga lafatra ho an'ny ankabeazan'ny fiaviana mankany amin'ny trano vaovao. Izay ianaran'ny alika amin'ny 8 ka hatramin'ny 12 herinandro dia hiaraka aminy mandrakizay. Amin'izao fotoana izao ny alika kely dia tsy maintsy ampidirina amin'ny olon-kafa ary mandeha mitsangatsangana amin'ny arabe (arabe) hisorohana ny loto na ny ahitra mandra-pahatongan'ny fitifirana faha-2 azy. Raha vita amin'ny 8 herinandro ny tifitra voalohany ary vita amin'ny 12 herinandro ny faharoa dia tsara ny misoratra anarana amin'ny akanin-jaza alika kely izay manomboka amin'ny 12 herinandro.
12 hatramin'ny 16 herinandro
Ankizy kely amin'ity taona ity dia mahazo aina ao an-tranony vaovao ary mahatsapa fa ilaina ny mamorona fonosana. Zava-dehibe ny mitadidy fa ny alika kely rehetra amin'izao fotoana izao dia namorona toetra ankapobeny. Ny sasany dia mpitondra teraka voajanahary, ny sasany eo antenatenan'ny làlana ary mety mandeha na amin'ny lalana inona na iza ary ny sasany manoa tena ary tena aleony tsy mitarika na inona na inona. Ny alika kely rehetra dia manana instinct hanana mpitondra afaka manome firafitra, satria ao an-tsainy raha tsy misy azy io dia tsy afaka miaina ilay fonosana. Noho izany, na dia ny alika mpanaiky teraka voajanahary aza dia mety hahatsapa fa ilaina ny handray azy ho toy ny alpha raha mahatsapa izy ireo fa ny hafa rehetra manodidina azy dia malemy loatra ka tsy afaka hikarakara ilay fonosana. Ireo alika ireo matetika dia tena sahiran-tsaina amin'ny andraikiny satria tena tsy tiany izany, saingy mahatsapa fa mila mitarika mitovy ihany. Rehefa dinihina tokoa, izy ireo dia resaka fiainana na fahafatesana.
Ny iray amin'ireo fanontaniana lehibe apetraky ny tompona vaovao dia ny maha-anjely azy mandritra ny herinandro roa voalohany ilay alika kely ary avy eo dia manomboka mipetaka amin'ny fiezahana mifehy ny zavatra manodidina azy izy. Izany dia mitranga rehefa alika kely tsy mahita ny olombelona ho mpitondra teraka voajanahary izay azony hajaina ary manandrana manamboatra ilay fonosana. Raha mitranga izany dia tsy midika akory izany hoe nahazo alika kely ianao, fa matetika kosa dia midika fa tsy tompona canine tsara ianao. Ny tompony dia tokony ho tony nefa hentitra ary hanaraka. Mametraha ny fitsipiky ny trano ary mifikira aminy. Ampianaro ny fankatoavana sy ny fomba fanaovana voditongotra amin'ny tadiny. Aza avela ny alika kely bolt nivoaka ny varavarana. Milamina sy matokia ary tadidio fa afaka mahatsapa ny fihetsem-ponao ny alika. Raha manana olana ara-pihetseham-po ianao dia fantatry ny alikao ary ho hitanao fa malemy izy. Aza adino foana ny fahatezerana alika dia fahalemena, koa misasà fofonaina fifehezana ary mifehy tena.
Raha mahatsapa ilay alika kely fa matanjaka saina kokoa noho ny olombelona izy dia tsy te ho eo amin'ny farany ambany. Tokony ho vonona ny tompona puppy fa afaka manandrana mametraka azy ho toy ny iray manjakazaka ao amin'ny fianakaviana . Eto no ilana hahalalanao ny toetra voajanahary alika ary hianaranao ny fitenin'izy ireo hahafahanao mamaky azy ireo. Mety ho hitany raha mety hikomy amin'ny tompony (toy ny tanora sasany) izy io ary mety hikorontana na hisento. Raha tokony hitranga izany dia miomàna hampiato ny fihetsika avy hatrany. Izy io dia toy ny ankizy maniry tsindrin-tsakafo alohan'ny sakafo hariva na mifoha aoriana. Mila miteny fotsiny ianao hoe TSIA. Tsy mitovy ny alika tsirairay, toy ny ankizy ihany, noho izany dia mila mamantatra izay mety aminao sy ny toe-javatra iainanao ianao. Raha masiaka dia fomba iray ny manindry azy amin'ny lamosiny ary mitazona azy eo amin'ny TSY mafy. Raha avela hiala amin'ny fitondran-tena ratsy ny alika kely dia tsy hanaja ny tompony intsony izany ary hahafantatra fa ny fikomiana dia manosika azy hanao izay tiany. Ny lakileny dia ny mba hilaminan'ny olombelona sy hatokisany ary hiorenany rehetra miaraka. Raha hitanao fa miantsoantso ianao na tezitra dia tsy voafehy ny olombelona ary mila mianatra ny fomba hanehoana ny tenanao ho olona azon'ny alika jerena sy hajaina. Ny alika dia tsy mihaino ny olona miovaova na inona na inona fa milamina, matoky tena ary mafy orina izy ireo. Tokony hisy ny fandeferana aotra amin'ny herisetra. Ny korontam-pitiavana sy ny fahalalana dia tsy hampijanona ny fihetsika ratsy. Pup dia tsy maintsy aseho haingana sy mafy fa ianao no tompon'andraikitra.
Raha maharitra io dia miantso ny mpiompy sy / na ny alika mpihetsiketsika izay mahatakatra ny fihetsika alika voajanahary ho fanampiana. Raha manana mpiompy tsara ianao izay mahatakatra ny alika, na dia miverina aminy andro vitsivitsy aza izy dia afaka manampy satria voafehin'ny mpiompy ilay alika ary manombatombana ny fihetsikao sy ny fahatakaranao an'io biby tadiavinao iainana io ianao. Ny fandefasana alika handeha hampiofanina nefa tsy hampiofana ny tenanao dia tsy mandeha mihitsy, satria ny fomba fiasan'ny alikanao matetika dia misy ifandraisany bebe kokoa amin'ireo olona iainany. Azonao atao ny mandefa ny alikanao hiofana, fa raha miverina amin'ny olona mbola tsy mahatakatra izay ilainy ilay alika dia mihetsika toy ny mpanara-dia malemy ary / na vaky fiaran-dalamby mampihetsi-po ao anaty ny alika dia hiverina amin'ny fomba taloha. Izany dia mandeha amin'ny alika rehetra amin'ny taona rehetra.
Ianaro ny fomba fikolokoloana ny alikanao. Ampianaro handry faingana amin'ny fikolokoloana sy ny fanalefahana ny hoho. Raha misedra olana ianao dia miantso vonjy ny mpiompy. Ny tsara indrindra dia ny hajan'ny alika sy ny fitokisany amin'ny resaka fikolokoloana amin'ny 16 herinandro.
Ny voajanahary voajanahary pups dia ny manandrana mitsapa ny filaharana ao anaty fonosana. Indrindra raha misy zaza. Raha manaiky ny tompony, mangina ary isan-kerinandro, ka mahatonga ilay alika hahatsapa fa ilaina ny mitarika ny trano, dia hihena ny fanajany ny tompony ary ho ambany noho ny mason'ireo alika ny tompony. Amin'ireto tranga ireto dia voatokana ho tompon'ny alika ny tompony ary ho hitanao fa hipoitra ny olana amin'ny fitondran-tena.
Ny alika kely dia tokony hanana fiandohana tsara amin'ny fiofanana crate rehefa miala ao an-tranon'ny mpiompy. Ampio ny zanak'alikao hahatsapa ho voaro amin'ny fanomezana azy ny fandriany manokana sy ny crate amin'ny toerana ahafahany irery rehefa mila fotoana mangina kely izy. Tokony hasiana menaka iray na roa isan'andro izy io, indrindra rehefa manamboatra sy misakafo hariva ary mikorisa amin'ny alina. Tsy tokony hanana ny fivezivezena ao an-trano izany raha tsy aorian'ny faha-6 volana na ny fitsangatsanganana an-trano ary ny fampiofanana dia mety ho lasa tena sarotra. Ny alika kely dia tokony hanomboka fankatoavana ara-dalàna amin'ny taona 6, aleo aloha kokoa.
Aza adino rehefa misafidy ny handray alika ianao dia misafidy ny hitondra biby ao an-tranonao. Ny zaza dia tsy zazakely ary ny olombelona dia tsy teraka miaraka am-bozona. Makà fotoana kely hianarana momba ny canine ary miomàna hanova ny fomba fiainanao handraisana ilay olona vaovao ao amin'ny fianakaviana.
mainty sy Tan anglisy alika kely mpiandry ondry amidy
alikakely bo chi amidy